२१ रुपैयाँमा किनेर ९६ रुपैयाँमा बेच्दा कालोबजारी हुदैन र सरकार ? – Gandaki Sandesh
२१ रुपैयाँमा किनेर ९६ रुपैयाँमा बेच्दा कालोबजारी हुदैन र सरकार ?
त्यस्तै, डिजेलबाट ३६।१५ रुपैयाँ र मट्टीतेलबाट १२।८८ रुपैयाँ प्रतिलिटर कर उठ्नेछ । यसअघि इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ रहेको पूर्वाधार विकास कर गत फागुनमा मात्र बढाएर सरकारले १० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। ठूलो अन्तरमा भन्सार शुल्क वृद्धि गर्दा यसअघिको तुलनामा मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ र वर्षको २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर उठ्नेछ।
पोखरा, साउन २३ । पाल्पाबाट भिमाद तर्फ आउदै गरेको ना ५ ख ५०३५ नम्वरको बस दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनाका कारण बसमा सवार करिव २० जना घाईते भएका छन... Read More
रेलमार्ग र्निमाण बारे छलफलका लागि चिनियाँ टोली आउदै
मंसिर ६, काठमान्डौ । नेपाल र चीनबीचको मित्रताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल गर्न आगामी साता उच्च स्तरीय चिनियाँ टोली नेपाल आउने भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार... Read More
पोखरा बैशाख ३१ । लकडाउन खुकुलो बनाए लगत्तै कोरोना संक्रमितको संख्या बृद्धि भएको छ । पछिल्लो अपडेट अनुसार २१७ जना संक्रमित संख्या पुगेको छ । नेपालले लकडाउन गरेको ५०... Read More